Degmada Gnosjö waxeey Småland uga taal qeeybta galbeed. Degmada waxeey xarun uu tahay gobolka-Gnosjö oo ka mid ah qeeybta warshadeeyna ee Iswiidhan ugu xoogeeysan. Gnosjö waxeey xaafad-bartameedka degmada, waxaana dagan ku dhawaad 4 500 oo qof. Xaafad-bartameedka markii laga soo tago, waxaa sii jiro six xaafad oo ka yar. Ku dhaawad 2 000 oo qof oo ka mid dad degmada waxeey daganyihiin baadiyaheed. Dhulka waa mid buuro leh, wanaa dhul caan ku ah jiqo iyo wabiyaal-yar. Degmada qeybteeda konfur-bariyeed, waxaa ku taalo beerta Store Musse oo leh wabiyo-yar oo qani ka ah shimbiro, dhul biyo badan iyo carro nafaqa leh iyo dhul qoyan oo jilicsan oo uu geed-gaab nadaray ka baxay oo ka mid ah koonfurta-Iswiidhan kuwa ugu weeyn.
TIG - svetsare Svetsare, manuell
1:e socialsekreterare till barn - och ungasektionen Socialsekreterare
Socialsekreterare till barn - och ungasektionen Socialsekreterare
Tandhygienist , Gnosjö Tandhygienist
Lagerarbete / montering Lagerarbetare
Bibliotekarie till folkbiblioteket i Gnosjö Bibliotekarie
Truckförare till Gnosjö Truckförare
Kultursekreterare till Gnosjö kommun Kultursekreterare
Biträdande förvaltningschef Enhetschef inom socialtjänst
Lärare i hem - och konsumentkunskap till Bäckaskolan 7 - 9 Specialpedagog
Junior Design Engineer Konstruktör, tillverkningsindustri
Lärare på vård - och omsorgsprogrammet till GKC Lärare i gymnasiet
Pizzabagare till Hillerstorp Pizzabagare
Junior Project Manager Produktutvecklare
Bogga 1 ee ka mid ah 13